Song Ji Hyo ၏မကြာမီထွက်ရှိတော့မည့် ဇာတ်လမ်းတွဲ Did we Love? ၏နမူနာဗီဒီယိုထွက်ရှိ | Asia News Bar
Song Ji Hyo ၏မကြာမီထွက်ရှိတော့မည့် ဇာတ်လမ်းတွဲ Did we Love? ၏နမူနာဗီဒီယိုထွက်ရှိ
JTBC မှထုတ်လွှင့်မည့် Did we love? ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် Song Ji Hyo မှ Son Ho Jun, Kim Min Joon, Song Jong Ho, Koo Ja Sung စသည့်မင်းသားတို့နှင့် အတူ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ ၁၄နှစ်ခန့် Single Mom အဖြစ်တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်လာခဲ့သော အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဘဝထဲကို အမျိုးသားလေးဦး တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပြောင်းလဲမှုများစွာ ကြုခဲ့ရပါတယ်။
Song Ji Hyo မှ No Ae Jung ဆိုသည့်ဇာတ်ရုပ်မှ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။Single Mom ဖြစ်သည့်အပြင် အချစ်ရေးကိုလည်း စိတ်ကုန်နေပီး သားသမီးအရေးကိုသာ အမြဲရှေ့တန်းတင်သော သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သော ဘဝထဲသို့ အမျိုးသားလေးဦး ဝင်ရောက်လာချိန်တွင်တော့ အရာရာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပီး ဘဝကရုပ်လုံးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Song Ji Hyo ဟာ KBS ရုပ်သံလိုင်းက ရိုက်ကူးသည့် Lovely Horribly ဆိုသည့် ဇာတ်လမ်းတွဲအပီး ၂နှစ်အကြာမှ ယခုဇာတ်လမ်းတွဲကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Song Ji Hyo နှင့် မင်းသားလေးဦးကြားက အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကို သိချင်ရင်တော့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ထွက်လာရင် ကြည့်ရူလိုက်ပါနော်။ Did we Love? ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာယခုထုတ်လွှင့်ပြသနေသော Mystic Pop – Up Bar အပြီးတွင် ထုတ်လွှင့်မည်ဟု သိရပါတယ်။ ယခုလောလောဆယ်တော့ နမူနာဗီဒီယိုလေးကိုပဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
(Zawgyi) Song Ji Hyo ၏မၾကာမီထြက္ရွိေတာ့မည့္ ဇာတ္လမ္းတြဲ Did we Love? ၏နမူနာဗီဒီယိုထြက္ရွိ
JTBC မွထုတ္လႊင့္မည့္ Did we love? ဇာတ္လမ္းတြဲတြင္ Song Ji Hyo မွ Son Ho Jun, Kim Min Joon, Song Jong Ho, Koo Ja Sung စသည့္မင္းသားတို႔ႏွင့္ အတူ ပါဝင္ရိုက္ကူးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဇာတ္လမ္းကေတာ့ ၁၄ႏွစ္ခန႔္ Single Mom အျဖစ္တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ဘဝထဲကို အမ်ိဳးသားေလးဦး တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ၾကဳခဲ့ရပါတယ္။
Song Ji Hyo မွ No Ae Jung ဆိုသည့္ဇာတ္႐ုပ္မွ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။Single Mom ျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်စ္ေရးကိုလည္း စိတ္ကုန္ေနပီး သားသမီးအေရးကိုသာ အျမဲေရွ႕တန္းတင္ေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘဝထဲသို႔ အမ်ိဳးသားေလးဦး ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ေတာ့ အရာရာေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပီး ဘဝက႐ုပ္လုံးေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ Song Ji Hyo ဟာ KBS ႐ုပ္သံလိုင္းက ရိုက္ကူးသည့္ Lovely Horribly ဆိုသည့္ ဇာတ္လမ္းတြဲအပီး ၂ႏွစ္အၾကာမွ ယခုဇာတ္လမ္းတြဲကို ျပန္လည္ရိုက္ကူးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Song Ji Hyo ႏွင့္ မင္းသားေလးဦးၾကားက အခ်စ္ဇာတ္လမ္းဟာ ဘယ္လိုေတြျဖစ္မလဲဆိုတာကို သိခ်င္ရင္ေတာ့ ဇာတ္လမ္းတြဲ ထြက္လာရင္ ၾကည့္႐ူလိုက္ပါေနာ္။ Did we Love? ဇာတ္လမ္းတြဲ ဟာယခုထုတ္လႊင့္ျပသေနေသာ Mystic Pop – Up Bar အၿပီးတြင္ ထုတ္လႊင့္မည္ဟု သိရပါတယ္။ ယခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ နမူနာဗီဒီယိုေလးကိုပဲ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္။
Next ခုနစ်နှစ်တာ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို အဆုံးသတ်လိုက်ပြီလို့ Yoon Kye Sang နဲ့ Honey Lee အတည်ပြု »
Previous « အနုပညာရှင်တွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အစွန်းရောက်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး အန္တရာယ်ပေးမှုများ(အပိုင်း ၁)
Netflix original K-drama series တွေထဲမှ လူကြိုက်အများဆုံး Series က?
သမီးငယ်လေးဟာ BTS ရဲ့ ပရိသတ်ဖြစ်ကြောင်း ဖောက်သည်ချလိုက်တဲ့ Penthouse အိုယွန်ဟီး (Eugene)